Public Health Concern दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आए पनि हाजिर गराई कामकाज गराउन स्वा.म को सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र !(पत्र सहित) – Public Health Concern
दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आए पनि हाजिर गराई कामकाज गराउन स्वा.म को सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र !(पत्र सहित)
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनबाट दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी आएपनि हाजिर गराई काम काज लगाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरु पुग्दा स्थानीय निकायहरु कस कसलाई हाजिर गराउने भन्ने अन्योलमा परेका थिए ।
मन्त्रालयले आज उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी पुगे पनि हाजिर गराई काम काजमा लगाउन निर्देशन दिएको हो । निर्णयमा बढी भएका स्थानमा कर्मचारी अवकाश र कुनै कारणले रिक्त भएपछि स्वत मिल्ने भनिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले पदनामको विषयमा पनि निर्णय गर्दै समायोजनका बेला जुन तहको पत्र लिएर गएको छ सोही अनुसार हाजिर गराई काम काज लगाउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव भानुभक्त न्यौपानेले यो निर्देशन पछि समायोजन पछि स्थानीय तहमा देखिएको अन्योल हटने दावी गरे ।
हेरौ स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा सम्पुर्ण स्थानीय तहलाई प्रेषित गरिएको पत्र :